May Nyane: May 2010
စိတ်ပျက်လက်ပျက် A to Z
ကိုယ့်ဘ၀ထဲ လက်သင့်ခံထားတဲ့ A to Z တွေကို ရေးဖြစ်ခဲ့တော့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ A to Z တွေကိုလည်း စဉ်းစားမိလာတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ.. စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရေးပါ၏..။
Artificial တချို့လှတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပေမဲ့ မကြိုက်ပါ..။
Bomb ကို တော်တော် မုန်းပါတယ်..။
Cigarette ကိုယ်တိုင် အရင်က သောက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ တော်တော် အဓိပ္ပါယ်မရှိ.. လူတွေကို ဒုက္ခပေးဖို့သက်သက် လုပ်ထားတာပဲလို့ ထင်မိတယ်..။
Death သူ့ကြောင့်ပဲ ချစ်သူတွေနဲ့ ခွဲရ.. ဒါပေမဲ့ သူမရှိရင်လည်း ငြီးငွေ့စရာဖြစ်မှာပါ.. ။
Enemy တယောက်ရှိရင် များပြီတဲ့..။ ဟုတ်ပါတယ်.. ကျမလည်း မရှိချင်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းနဲ့ အဆိုး တွဲတဲ့ သဘာဝအရတော့ ရှိနေမှာပဲ ဖြစ်၏…။ ကျမမှာ ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ.. ကျမ မသိပါ။ ကျမအသိအမှတ်ပြုထားသလောက် ရေကြည့်ရင်တော့ လက်ဆယ်ချောင်းစာ မပြည့်ပါဘူး (မဆိုးပါဘူးနော် ) )
Flood ကြောက်တယ်.. မုန်းတယ်.. (ကျမက ရေလုံးဝမကူးတတ်တော့ ပိုဆိုး၏)။ ပြီးတော့ Fascism …
Gun မရှိရင် မဖြစ်ဘူးလားလို့ ခဏခဏ တွေးမိဖူးတယ်…။ အဲဒီအရာကြောင့် လူမိုက်အားရ ဖြစ်တာလို့ လုံးလုံး ယုံတယ်။ နောက်တခုဆို Gang အဲဒါလည်း မုန်းတယ်။ (SPDC ကိုဆိုရင် Government လို့ မသတ်မှတ် Gang လို့ သတ်မှတ်၏)။
Hate သိပ်အရေးပါတဲ့အရာ.. သူ့ကြောင့် ခိုက်ရန်ကနေ စစ်အထိ… သူများပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တာ..။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တခု။
Inferiority Complex ကတော့ လူတွေမှာ ရှိတတ်ပြီး လူမှုဝန်းကျင်အတွက် ပြဿနာရှိတဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေထဲမှာ ကျမ သတိအထားမိဆုံး အနေအထားတခုပါ။ အဲဒီပြဿနာမျိုး ရှိနေတဲ့ လူတွေကြောင့်ပဲ လူမှုဝန်းကျင်မှာ မတော်မတည့် စိတ်ပျက်စရာတွေ ကြုံနေရတာ သတိထားမိတယ်။ (ကျမတို့နိုင်ငံကို ချုပ်ကိုင်နေသူ အများစုမှာ အဲဒီ စိတ်ပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ ကျမ သေချာတယ်။) နောက်တမျိုး စိတ်ညစ်တာ Insects…
Junta ပေါ့..။ နောက်တခုက Jealous ..
Killer, Killing Field, အဲဒါတွေကို ကြောက်တယ်။
Liar သိပ်ကို မုန်းတာ။
Murder, သိပ်စိတ်ညစ်တဲ့ စကားလုံး (နောက်တခုက Money.. မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း :D)
Need - ဘ၀ပင်လယ်ထဲ တသက်လုံး လက်ပစ်ကူးနေခဲ့ရတာ အဲဒီစကားလုံးနဲ့အတူ..။ အဲဒီစကား မကြားချင်တော့.. ။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုလည်း ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်။
Operation ဆိုတဲ့စကားလုံးက ဘယ်နေရာမှာမဆို (ကောင်းဖို့လုပ်တာဆိုဦးတော့) စိတ်ညစ်စရာတော့ ကောင်းတာအမှန်..။
Poverty - လူသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အဲဒီဆင်းရဲခြင်းကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရင် တောင် လူ့လောက တော်တော် သာယာမယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဗမာပြည်စစ်အစိုးရ အပါအ၀င် အာဏာရှင်အစိုးရတွေကတော့ ဒါကိုပဲ လက်နက်တခုလို သုံးပြီး တိုင်းပြည်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတာမဟုတ်လား။
Questions…. တွေကို ရှောင်ချင်တယ်.. မကြိုက်..။ ကိုယ်တိုင်လည်း မမေးချင်။
Robbery အူလှိုက် အသည်းလှိုက် မုန်းတာပဲ..။ (ဒါကြောင့် ဒင့်တို့အုပ်စုကို မုန်းတာ..)
SPDC.. (Stupid, Psycho, Damn, Cruel)
Thief သူများပစ္စည်း မတရားသဖြင့် လိုချင်တဲ့သတ္တ၀ါတွေ.. သိပ်မုန်း
USDA (ကြံ့ဖွံ့) Union of Damn Abnormal groups
Violence အဲဒါကို လူ့လောကထဲမှာ မရှိအောင် ဘလိုလုပ်ရပါ့မလဲလို့ အမြဲတွေးနေမိတဲ့ အရာ…
War.. တူတူပါပဲ..။ အဲဒီစာလုံးကိုတောင် ရှောင်ချင်တယ်။
Xenophobia.. ကျမမှာ ရှိတယ်.. ယုံလား…
Yell ကျမ ကြောက်တဲ့.. မကြိုက်တဲ့ အသံတသံ (တခါတလေ စိတ်ဆိုးရင် ကိုယ်တိုင် လုပ်မိ)
(ရေးချင်သူ မှန်သမျှကို Tag ပါ၏)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကကြီး.. ကနေ အ.. အထိ။
စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ သိပ်များနေတဲ့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ တွေးစရာရှိရင် နည်းနည်း သက်သာမယ်ထင်လို့။ သိပ္ပံသမား မနော်က A to Z ဆိုတော့ မြန်မာစာသမား ကျမက “က” ကြီး ကနေ “အ”..အထိ ပေါ့၊ ကိုယ်ကစလို့ တခါမျှ tag မလုပ်ဖူး..။ ခု လုပ်ပြီ။ (အရင်ကလည်း အဲလို တယောက် Tag ဖူးလား မသိ၊ မမှတ်မိတော့ပါ)
ကကြီး… လို့ ဆိုလိုက်ရင် တွေးစရာတွေ တသီတတန်းကြီး ရလာတာပဲ။
ငယ်ငယ်က ကကြီးရေးဖို့ စသင်တဲ့ ဆရာမက သူငယ်တန်း အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်ဖြူဖြူရှိန်တဲ့။ တကယ့် ဖြူဖြူနုနု.. နူးနူးညံ့ညံ့လေး။။ ဆရာမကို သိပ်ချစ်တာ မှတ်မိတယ်။
နောက်တော့ .. မူလတန်းကတည်းက ကျောင်းကပွဲတွေမှာ ကဗျာလွတ်နဲ့ စတက်တဲ့ မင်းသမီး..။ အသက် ၁၅နှစ်ထိ တောက်လျှောက် က ခဲ့တာ။ နောက်တော့ မကဖြစ်တော့။ ကကွက်တွေလည်း မေ့ကုန်ရော..။ ခု သမီးကို အက ကူသင်ပေးရင်း နည်းနည်းတော့ ပြန်ကတတ်လာသား  ။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်း ခါး ခြေ လက်မှာ ခါးက ပျောက်တောက်တောက် ဆိုတော့ ဟီဟိ..။ နောက်တော့ ကဗျာ……….
ခက်.. ကျမရဲ့ နာမည်အရင်းထဲက နောက်စာလုံး .. ငယ်ငယ်က လူတွေခေါ်တာ ခက်ခက်..။ ကျမကလည်း စကားပြောရင် ခက်ကလေ.. လို့ပြောခဲ့တာ။ နောက် မေငြိမ်းလို့လည်း ဖြစ်ရော.. အများက မငြိမ်းလို့ အခေါ်များတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း စကားပြောရင် မငြိမ်းကလို့ ဖြစ်သွားတာ..။ ဒါမဲ့ အမှန်ပြောရင်တော့ “မယိမ်း”လို့ အသံထွက်မိတာ များတယ်။ “ခက်ကလေ”.. လို့ ပြောခဲ့ရတာကိုတော့ လွမ်းတုန်းပဲ..။ (နောက်တကြောင်းကတော့ ချစ်ခြင်းတရား.. ပေါ့လေ။ အဲဒီ ချစ်ခြင်းတရားကြောင့်ပဲ စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ် ထင်တာပဲ)။
ဂန္တ၀င် … သီချင်း.. ရုပ်ရှင်.. ပန်းချီကား .. စာပေတွေဆိုရင် တော်တော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်။
ဃကြီးလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ကျမ သတိရသွားတာက သူငယ်ချင်း ဟယ်ရီလင်း(Rocker) ကိုပဲ။ သူ့ကို ကျမတို့က “ဃကြီး” လို့ခေါ်တယ်။ လူကြည့်တော့ သူက လမ်းသူရဲလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ စိတ်ကောင်း ရှိတဲ့သူ..။ သူနဲ့ ကျမ လေထန်ကုန်းမှာ အတူတူ ထိုင်နေရင် သူငယ်ချင်းတချို့က ပြောတယ်..။ သူနဲ့ ကျမ မောင်နှမလိုပဲ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်တဲ့။ နောက်တယောက်လည်း ရှိသေးတယ်.. ကျမနဲ့ ရုပ်တူတယ်လို့ အပြောခံရတာ.. အဆိုတော်ပဲ.. Rocker ပဲ၊ ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်လဲ..။ ပဟေဠိ အဖြေညှိရအောင်.. :P။ (အကြောင်းသိတွေ ၀င်မဖြေကြေး)
“င” ဆိုရင်တော့ သတိရတာ.. ငုပဲ..။ ငုပန်းရဲ့ အ၀ါတောက်ပုံနဲ့ နွေထဲ ရဲရဲ ၀ါတာကို သိပ်သဘောကျတာ..။ ငုတွေရဲ့ အ၀ါကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ပန်းချီဆွဲဖူးတယ်။ ပြီးတော့ ဘာမှမဆိုင်ပဲ ငုဝါတွေ မြင်ရင် Van Gogh ကို သတိရမိတတ်တယ်။
စာပေပေါ့ကွယ်..။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်တော့မှအချိန်အကြာကြီး မခွဲနိုင်တဲ့အဖော်..။ ကစားတဲ့ အရွယ်မှာတောင် ကစားတာနဲ့ စာဖတ်တာကို လဲခဲ့လို့ ချူချာတဲ့ ကလေး ဖြစ်ခဲ့တာ..။ ခုထိ သူသာ အဖော်မွန်စစ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆရာမဘ၀..။ အမွေ့လျော်မိဆုံး အလုပ်..။ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာတောင် စာသင်ခန်းထဲ စာသင်ပေးနေရချိန်ခဏမှာ နေမကောင်းတာတွေ ပျောက်နေတဲ့အထိ.. ဆရာမအလုပ်.. ဆရာမဘ၀ထဲမှာ ပျော်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုထိ ပြန်မတွေးချင်ဆုံး အလွမ်းတွေကလည်း ဆရာမဘ၀ကိုပါပဲ။
ဈေးဝယ်တဲ့ ကိစ္စ (Shopping) ပေါ့..။ တော်တော် ၀ါသနာပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း ပရိဘောဂလို.. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ရတာ ၀ါသနာပါပါတယ်။ အ၀တ်အစား ၀ယ်ရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်ရော ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ လိုက်မယ် ထင်တာ တွေ့ရင် ဆွဲဝယ်ထားတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိပါ၏..။
ည တွေကို ကြိုက်တယ်.. လသာတာ.. ကြယ်တွေကို မြင်ရတာ.. လေအေးလေး တိုက်နေတတ်တဲ့ ည.. ဟာ၊ ကျမအတွက် စာဖတ် စာရေးလုပ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်လို့ အင်မတန် ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ပြီးတော့ များသောအားဖြင့် ရာသီဥတုကလည်း အေးနေတတ်တာ မို့လည်း ည..ကို သဘောကျတာ ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြွင်းချက်က ကျမက အမှောင်ကိုကျတော့ ကြောက်တတ်သူပါ။
ဋီကာ .. တွေဟာ များသောအားဖြင့် သမိုင်းကြောင်းတွေ နောက်ခံမို့ ဖတ်ရမှာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ စွဲလန်းတယ်ဆိုတဲ့ အထဲတော့ မပါပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ စာရေးဆရာမို့ ဘာလေးကိုမဆို ဋီကာချဲ့ တွေးရ ရေးရတာပါပဲလေ..။
ဌ.. ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ အင်မတန် ကံဆုံတာက “ဌာန” ဆိုတာပဲ ..။ အသက် ၂၁နှစ် ကျော်ကျော်မှာ ကျောင်းဆရာမ စဖြစ်တော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာ ဌာန တဲ့။ အဲသမှာ ကျင်လည်လိုက်တာ နှစ် ၂၀နီးပါး။ နောက်တော့ ပြည်ပရောက်.. ။ ရောက်ပြန်တော့လည်း အလုပ်လုပ်ရသမျှက အသံလွှင့် ဌာနတွေ။ ခုလည်း Voice Of America ရဲ့ မြန်မာဌာန မှာ…။ အသက်တောင် ၄၅နှစ် ပြည့်တော့မယ်..။ ခုထိတော့ ဌာနဆိုတဲ့ နေရာသတ်မှတ်ချက်တခုထဲ တ၀ဲဝဲလည်..။
ကျမကြိုက်တဲ့ တို့စရာတွေထဲ ဍရင်ကောက်ညွှန့် လေးတွေ ပါပါတယ်။ ငပိရည်ဖျော်.. တမာညွန့်ပြုတ်၊ သရက်သီးကင်းလေးတွေနဲ့ ဍရင်ကောက်ညွှန့် တွဲပြီး တို့စားရင် အလွန်လိုက်။ ကြော်စားလည်း ကြိုက်တာပဲ..။ ပြောရင်းနဲ့ ခုတောင် လွမ်းလာပြီ။ အမေရိကမှာ မြန်မာအစာ တော်တော်များများ ရပေမဲ့ ဍ ရင်ကောက်ညွှန့် တော့ မရသေးပါ.. 
တခါတလေ အခြေခံ အက္ခရာတွေထဲမှာ မထည့်သင့်တဲ့ အက္ခရာတွေ ရှိတယ်လို့ စဉ်းစားမိတဲ့အထဲမှာ ဎ ရေမှုတ် က ရှေ့ဆုံးက ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာစာနဲ့ သုံးရတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ နယ်ပယ်ထဲ အသုံးမှ မတည့်လှတာ။ ကျမ သတိရသလောက် တွေ့ဖူးသလောက်ထဲ ဎ ရေမှုတ်ကို သုံးပြီး “ယသ၀ဎုန” သူဌေးသား နာမည် ပေါင်းတာ..ဒါတောင် အဲဒါ အမှန်မဟုတ်သေး.. တကယ့်အပေါင်းက ဎ ရေမှုတ် အထဲထဲမှာ ဍရင်ကောက်ကို ချိတ်ပြီး နှစ်လုံးပါဋ်ဆင့်နဲ့ ပေါင်းတာ (စာရိုက်မရလို့)။ အသံထွက်တော့ “ယာ့သာ့ဝတ်ဓန” လို့ ထွက်တာ။ ပြဿနာက ပါဠိက လာလို့သာ အဓိပ္ပါယ်မှန်ရအောင် အဲလိုကြီးပေါင်းရတာကိုး..။ တကယ်တော့ တချို့ စာလုံးအက္ခရာတွေကို ဗမာအက္ခရာနဲ့ ဖလှယ်ရင် ပိုလွယ်မယ်ထင်တာပဲ။ (ဒီနေရာမှာ စကားစပ်ပြောချင်တာက စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မှန်ဖို့အတွက် သတ်ပုံက အရေးကြီးတာပါရှင်)
သူလည်း တူတူပဲ..။ နငယ်နဲ့ ပေါင်းလို့ ရသားနဲ့ ဘာလို့ ဏကြီးနဲ့ ပေါင်းမလဲနော်..။ ဂျာမနီ.. ဂျာမဏီ..။ ဒါပေမဲ့ တချို့ နေရာကျတော့လည်း အဓိပ္ပါယ်ကို ပြဋ္ဌာန်းနေပြန်ရော.. ဇာမနီငှက်.. ဇာမဏီငှက်။ အဆိုတော်တယောက်ကတော့ ဏာဏီး ဆိုပဲ..။
တေးဂီတ ပါပဲ..။ တခုခု အထူးသဖြင့်ပြောဆိုရင်တော့ တယောသံ….။
ထေရ၀ါဒ.. တကယ့် စိတ်ငြိမ်းရာ အမှန် လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံပါတယ်။
ဒေါနပန်းတွေ ဘာလို့ ရှားပါးသွားသလဲလို့ မကြာခဏ သတိရတယ်..။ ကျမစိတ်ထင်တော့ ဒေါနပန်းက ဗမာပြည်မှာသာ ရှိတယ်ထင်တာပဲ..။ နောက်တခုက ကျမနဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး သူ မရှိရင် ပိုကောင်းမှာလို့လည်း သိတဲ့ ဒေါသပေါ့..။ ကျမရဲ့ အားနည်းချက်က ဒေါသကြီးတာ..။ ဒါနပြုတာကိုတော့လည်း ကောင်းမှန်းသိပါတယ်ရှင်..:D ။
Chemistry အရ.. တယောက်နဲ့တယောက် ချစ်မိကြသတဲ့..။ တကယ်ပဲ အချစ်ဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ဓာတ်သဘောကိစ္စပဲ မဟုတ်လား..။ ကျမကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ချစ်တတ်တဲ့ သဘာဝလေးပါလာတာကို သိပ်သဘောကျတာပဲ 
နားလည်မှု…။ လူမှုလောကထဲမှာ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်လို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒီတခု ရှိရင်ကို တော်တော် ငြိမ်းချမ်းပြီ။ (ပြီးတော့ နေရောင်ခြည်..)
ပုဂံမြို့ဟောင်း၊ ပုထိုးတွေ..၊ ပုတီးတွေ..၊ ပုဝါတွေ..၊ ပန်းရောင်ပစ္စည်းတွေ..၊ ပန်းရောင်စုံတွေ…၊ ပန်းချီ..၊ ပင်လယ်ပြင် နဲ့ ပါရမီဖက် (ဟဲဟဲ ဘာရမလဲ.. ငါကွ)
ဘ၀ဖြစ်တည်မှု.. (ဗုဒ္ဓအဆိုအမိန့်တွေကို လက်သင့်ခံသော်ငြားလည်း… “ကျမချစ်မြဲ သံသာဝဲမှ ခွဲထွက်ချင်ဘူး တပ်မက်ဦးမည်..”)
ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ယက်ထည်ဖျင်စ..ပြီးတော့ ယာတော…။
ရတုကဗျာ.. နဲ့ ရာသီသဘာဝ …
လပြည့်ဝိုင်းဝိုင်းကြီး မြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲ အေးချမ်းတယ်..။
၀က်သားတုတ်ထိုး (ဟီဟိ.. တကယ်ပြောတာ။ ခုထိ အိမ်မှာ တလ ၂ခါလောက် လုပ်စား တယ်)
သား.. သမီး.. သဘာ၀၀န်းကျင်..
ဟီရိသြတ္တပ..။ မကောင်းမှုပြုရန် ရှက်ခြင်း/ကြောက်ခြင်း
သနားတဲ့ ငှက်ထဲ ဠင်းတ ထိပ်ဆုံးက..။ သူ့ခမျာ.. ရုပ်ကလည်း ဆိုးရှာသေး.. ၊ အညှီအပုပ် စားလို့မို့ လူတွေ ရွံရှာစက်ဆုပ်တာလည်း ခံရသေး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒါ သူ့သဘာဝပဲ မဟုတ်ဘူးလား..။ သူတို့ကို အရာသွင်းတာဆိုလို့ တိဗက်လူမျိုးတွေပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျမကိုယ်တိုင်ရော.. အင်း… ဠင်းတတွေနားတော့ မနေချင်တာ.. မနေနိုင်တာ အမှန်ပါလေ။ (အံ့သြစရာကောင်းတာတခုက သူ့နာမည်ကို ဠ ကြီးနဲ့ ပေါင်းတာ သူ့ပုံစံအတိုင်း မြင်ရသလိုရှိနေတာပဲ.. နော်။)
(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ကကြီးကနေ အထိ ရေးဖို့ စိတ်ကူးရသွားတာက ဆြာဂျီး အတ္တကျော် ကြောင့် :P)
စိတ်ထဲရှိတဲ့ A to Z
ဒီတလော.. စိတ်တွေ လေလွင့်..။ အလွင့်.. ဆိုပြီး ကဗျာတပုဒ်ရေးမယ် စဉ်းစားနေမိတုန်း..။ ပန်းချီဆရာ.. ကဗျာဆရာ သည်မော်နိုင်..ရဲ့ ကဗျာတွေ ဖတ်လိုက်ရ…။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ရထားတဲ့ ကဗျာစိတ်ကလေး တကယ်ပဲ လွင့်ထွက်သွားပြီး..၊ သူ့ကဗျာတွေထဲ နစ်ဝင်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ လုံလောက်ပြီး………… မနော်ဟရီ tag တဲ့ A to Z လေးပဲ ရေးမယ်ပေါ့။
A ဆိုတဲ့ စာလုံးကို မြင်လိုက်ရင် ဦးဆုံးသတိရတာက Art ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုပဲ…။ ဟုတ်တယ်.. Art နဲ့ ပတ်သက်သမျှ အကုန် ကျမ ငြိတွယ်တယ်။ နောက်ဆင့်ပွားပြောရရင်တော့ Arts ပေါ့..။
Buddha.. ကျမရဲ့ စိတ်နှလုံးကို အမြဲ လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး တင်းကျပ်နေသမျှ ဘ၀အမောတွေကို တဒင်္ဂဖြစ်ဖြစ် ပြေပျောက်စေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ….
Color … ကျမက အရောင်တွေကို တော်တော် စွဲလန်းပါတယ်…။ အရောင်တွေထဲမှာတော့ ဗင်ဂိုးရဲ့ အရောင်တွေကို အခံစားရဆုံး…။ ဘယ်နေရာမှာမဆို အရောင်တွေ စုံလေ.. အရောင်တွေ လင်းလေ… ကျမ သဘောကျလေ…။ ဒါကြောင့် ဒီမှာဆိုရင် သစ်ပင်တွေ အရောင်စုံလှတဲ့ Fall ရာသီကို ကြိုက်တယ်။
Dad … ကျမရဲ့ Second God … ခုချိန်ထိ တရက်မှ သတိမရတဲ့နေ့မရှိလောက်အောင် အဖေက ကျမကို လွှမ်းမိုးပါတယ်..။
Ethic … လူတယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး တန်ဖိုးတခုအဖြစ် ကျမ ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်လေ့ ရှိတာ ကိုယ်ကျင့်တရားပါပဲ။ ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်းသိမ်းနိုင်သူကို အလွန်အထင်ကြီးပြီး မထိန်းနိုင်သူတွေကို အလွန်အထင်သေးတဲ့ တဘက်စွန်းရောက်တဲ့ စိတ် ကျမမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါဖြင့် ကျမက ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ လူတဘက်သားရဲ့ ဘ၀နဲ့ စိတ်နှလုံးကို ထိခိုက်အောင် လုပ်တာမျိုး.. ဒုက္ခပေးတာမျိုး နဲ့ လိမ်လည်တတ်တာမျိုး..။ ဒီလောက်ပါပဲ.. သိပ်များများစားစား မဟုတ်ပါဘူး။ (နောက်ထပ် ပြောခွင့် ရှိရင်တော့ Earth… နဲ့ Emotion…)
Freedom… အဲဒါလည်း ကျမ အင်မတန် တန်ဖိုးထားတဲ့အပြင် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀န်းကျင်က လူတွေကို ရစေဖို့လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားမိပါတယ်။ ဥပမာ.. ခင်ပွန်းသည်နဲ့ သားသမီးများ….။ (နောက်တခု ကျမရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတခုလုံးမှာ အလွှမ်းမိုးဆုံး Family)
God… God ဆိုတာ အများကြီး ရှိနိုင်လား.. ကျမ မသိပါ..။ ကျမအတွက်တော့ God တွေ အများသား…။ ကျမအတွက် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ် စံမီတဲ့သူတွေကို ကျမက God လိုပဲ လေးစားမြတ်နိုးပါ၏…။
Hero.. ။ သာမန်လူတို့ လုပ်နိုင်ခဲသော သြကာသလောကကောင်းကျိုး လူသားကောင်းကျိုးကို ဘာကိုမှ မကြောက်ဘဲ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်သူမှန်သမျှ.. ကျမရဲ့ မြတ်နိုးစွာသော သူရဲကောင်းများပါ..။
June.. ကျမကို မွေးတဲ့လ..။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ကုန်ဆုံးပြီး ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့လ..။ ကျမချစ်တဲ့ မိုးရာသီကို သေသေချာချာ ပီပီပြင်ပြင် စမြင်ရတဲ့လ..။ တကယ်လို့ ဘိုနာမည် မပေးမနေရ ပေးမယ်ဆိုရင်တောင် နာမည်ကို June လို့ ပေးချင်ခဲ့တာ..။ ခုတော့ အများခေါ်ကြတာ May ဖြစ်နေရပြီ။
Kamma…. ကံအကြောင်းတရားကို တကယ် ယုံကြည်တာပါ..။ ဒါနဲ့ပဲ တတ်နိုင်သလောက် မကောင်းမှု(သူတပါးကို ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲ ကျမက မကောင်းမှုလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်)ကို ရှောင်ကျဉ်ဖြစ်တာပါ။
Love ပေါ့..။ အချစ်က ကမ္ဘာမြေကို ဖန်ဆင်းတယ်လို့ ကျမ တကယ်ယုံကြည်တာ.. နှစ်လိုတာပါ..။
Mom, အမေ့ဘ၀မှာ ကျမအတွက်သာ အပင်ပန်းရဆုံး စိတ်နှလုံး အထိခိုက်ရဆုံးပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့..။ (တိုက်ဆိုင်တာ နောက်တခုက ကျမတို့ မိသားစု၅ယောက်မှာ ကလေးတွေအဖေ.. ကျမ.. သားကြီး.. သမီး နဲ့ သားငယ်တို့ ၅ယောက်စလုံးရဲ့ နာမည်တွေမှာ M.. နဲ့ စပေါင်းရတဲ့ စကားလုံး တလုံးစီ ပါနေတာပါ)
Native Land ……. ဒါကတော့ အထူးတလည် မဟုတ်နိုင်..။ လူတိုင်း ကိုယ့်လိုပဲ ရှိမှာပါ။ ကျမက နည်းနည်းလေး ပိုထူးနိုင်တာက ကျမရဲ့ ဇာတိက ရန်ကုန်ဆိုပေမဲ့ ကျမက အသက်ကြီးလာရင် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဇာတိ.. သံလွင်မြစ်ဘေးက ရွာလေးဆီမှာပဲ အေးအေးလူလူ သွားနေချင်တာပါ..။ ဒါလည်း ကျမတို့ ဇာတိမြေပဲ မဟုတ်လားနော်..။
Oldies … (Oldies Songs, Oldies Movies, Oldies Novels, Oldies Art….)
ခုထိ အဲလိုအဟောင်းတွေကို မက်မက်စက်စက် ရှိလှပါတယ်…။ အရှေ့တိုင်းရော အနောက်တိုင်းရောရဲ့ အဟောင်းတွေကို တသသ စွဲလန်း…။
Peace အပြင် ဘာရှိဦးမလဲ…။ သြော် နောက်တခုဆိုရင်တော့ Patriot ပေါ့။
Quality ... ကျမကတော့ ဘယ်နယ်ပယ်အတွက်မဆို Quality က အရေးပါလှတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ရှိအောင် ကြိုးစားလုပ်ယူဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်..။
Rendezvous... ခုလို ကိုယ့် ဇာတိမြေနဲ့ ဝေးရာ.. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဝေးရာဆီမှာ ရောက်နေရတဲ့ ကျမအတွက်တော့ အဲဒီ ဆုံစည်းရာလေးက အရေးကြီးပါတယ်..။
Sea… ပန်ဒိုရာကတော့ ဦးထားပြီ။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်..။ ခုချိန်ထိ တနေရာရာကို စိတ်လက် အပမ်းဖြေသွားစို့ဆိုရင် ကျမက ပင်လယ်ဆီကိုသာ ရွေးချယ်မြဲ..။
Truth... အမှန်တရားတဲ့..။ ကျမအတွက်တော့ ဒါဟာ သစ္စာတရားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ထက်ထိ စိတ်လက်ချမ်းသာနေရသမျှ.. နောက်.. စိတ်လက်ညစ်ညူးရသမျှ..။ အဲလိုပဲ တချို့လူတွေ ကျမကို ချစ်သမျှ.. တချို့လူတွေ ကျမကို မုန်းသမျှတွေက ကျမရဲ့ အဲဒီ အမှန်တရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါပဲ..။
University... အတ္တကြီးတယ်ပဲဆိုဆို.. တက္ကသိုလ်မှန်သမျှရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ကျမ ချစ်တယ်..။
Victory... ကျမ လောဘကြီးပါတယ်..။ အမြဲတမ်း အောင်ပွဲကိုသာ လိုချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ
Julius Caesar ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ I came, I saw, I conquered (Veni, vidi, vici) ဆိုတာကို သိပ်သဘောကျတာလေ..။
Wild … သဘာဝမှန်သမျှက … ကျမ စိတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အရာ..။
Xylophone... အဲလို ၀ါးချပ်လေးတွေကို အသံသာအောင် စီထားတဲ့ တူရိယာကြောင့် ကြားရတဲ့ ဂီတသံကို တကယ်ပဲ နှစ်ခြိုက်လှပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့.. ဆုံးရှုံးသွားပြီးခဲ့သမျှတွေထဲမှာ.. အတမ်းတရဆုံးအရာ ထင်ပါရဲ့..။ ကံကောင်းထောက်မစွာ.. ကျမက ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ပျိုရွယ်စဉ်ဘ၀ကို ရခဲ့ပါတယ်။
Zuma… လောလောဆယ် ပျင်းရင်.. စိတ်တွေ ရှုပ်ရင်.. ကစားတဲ့ Game.. မဆိုးပါဘူး အပျင်းပြေတယ်..။
(အမလေး… A to Z အကုန်ရေးဖို့ တော်တော် ဦးနှောက်စားသား.. ဂျီးဒေါ် မနော်ရေ..)
နောက်ထပ် လုံးဝ မရေးချင်တော့တာ ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းတွေပဲ..။
လောကကြီးမှာ နှမျောတသစရာတွေကိုချည်း ဆုံးရှုံးနေရတာ.. တရား.. ဟုတ်ရဲ့လား..။
တရားကို သံသယမဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီတရားက ကိုယ်တွေကိုချည်း ပြနေတော့ စိတ်ထဲ အထိနာလှတယ်..။ ဆန်ရင်း နာနာဖွတ်သတဲ့လား.. တရား…..။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ သွားနှင့်သူတွေကို နှမျောနေမိတာကရော.. တရားပါရဲ့လား..။
ရေငတ် အစာငတ် အလင်းရောင်ငတ်တဲ့လောက..
ရေများရာ မိုးရွာတဲ့ လောက..
ဗူးတောင်းတွေ နစ်လို့ ဇောင်းခြမ်းတွေပေါ်တဲ့ လောက…
ဘုရားကားအောက် မျောက်ကားအထက် လောက..
အဲဒီ လောကထဲက ထွက်သွားသူတွေဟာ အနည်းဆုံးတော့ ငြိမ်းအေးရာရသွားမှာအမှန်..။
ဒီတလော မြန်မာပြည်က ရာသီဥတုအပူ.. လူတွေရဲ့ ရင်ထဲက သောကအပူတွေ ကူးစက်လို့ အပူတွေ ဖိစီးနေတာ…။ တကယ်တော့ ဘာစာတလုံးမှ မရေးချင်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၅ မှာ ဘလော့ရေးသက်လေး ၃နှစ်ပြည့်လို့မို့ အမှတ်တရလေး တခုခု ရေးချင်တယ် လို့ တွေးထားခဲ့ပေမဲ့ မေ ၁၁ မှာ ပန်းချီ သန်းမြင့်အောင် ဆုံးတဲ့ သတင်း ၀င်လာတာမှာ.. ဘာမှ မရေးချင် မတွေးချင်တော့..။ ဒီခေတ်ထဲ အင်မတန် ရိုးသားအေးချမ်းတဲ့ အဲဒီလူငယ်လေးကို တချိန်လုံးမြင်ယောင်နေမိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတတ်တဲ့ လူငယ်လေးပေါ့။ ၂၀၀၇မှာ ဂျူး၊ မေငြိမ်း၊ ခက်မာ၊ မိုချာ့… စာရေးဆရာမလေးယောက်ရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို စုပြီး ရောင်စဉ်များနဲ့ ကစားခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ခဲ့တာ သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတစုပေါ့။ သူက ဒိုင်ခံ.. စီစဉ်ရတာ..။ အဲဒီထဲပါတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ပုံတူ Sketch တွေလည်း သူပဲ ရေးတာ..။ ပြီးတော့ ကျမ အတွန့်တက်သမျှ.. ဗိုလ်ကျသမျှ.. ခံရရှာတာလည်း သူ ပေါ့..။ အမြဲ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ သီးခံတတ်တဲ့ လူငယ်လေး..။ ကျမထက်နောက်ကျပြီးမှာ လူ့လောကထဲ ရောက်လာတဲ့ အဲဒီလူငယ်လေးက ကျမထက်စောပြီး ပြန်ထွက်သွားခဲ့တာ..။ ဗြုန်းစားကြီး..။ ဒီတလော သူ ပန်းချီရေးတာတွေ Tone ပြောင်းလာလို့.. ပြီးတော့ ပန်းချီတွေ အများကြီး ရေးဖြစ်နေတာ တွေ့နေရလို့ စိတ်ချမ်းသာနေလို့မှ မဆုံးခင်.. သူကတော့ ဆုံးခဲ့ပြီ။
ကိုအောင်ဝေးက သန်းမြင့်အောင်အကြောင်း အမှတ်တရ ရေးပါဦးတဲ့..။ မရေးချင်တော့ပါဘူး အကိုရာ.. စိတ် တော်တော်ထိခိုက်တယ်.. လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်။ နောက်တော့ သူ့အတွက် တခုခုလေး အမှတ်တရဖြစ်ချင်လို့ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြန်တယ်..။ နောက်တော့ ရေပြဿနာတွေ.. အပူပြဿနာတွေ မနိုင်ရင်ကာ လူတွေ သေနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထဲ လူက ပျော့ခွေနေနေတုန်း…. အဲဒီတုန်းပဲ ဗြုန်းဆို.. သုမောင်.. ဆုံးပြီ.. တဲ့။ ၁၆ မေ တနင်္ဂနွေည.. တဲ့။
သုမောင်ဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်း ၀င်လာတော့ ပထမဆုံး သတိရတာ ဖေဖေ့ကိုပဲ..။ (ဦး) သုမောင်ထက် ၅နှစ်ပဲ ကြီးပြီး ဦးသုမောင်ထက် ၉နှစ်ကျော် စောပြီး လူ့လောကထဲက ထွက်သွားခဲ့တဲ့ ကျမအဖေက သုမောင်ကို စာရော.. အသံရော.. သရုပ်ဆောင်တာကိုရော အင်မတန်ကြိုက်တာပါ။ နောက်ပိုင်း ဗမာရုပ်ရှင်တွေကို မကြိုက်တော့တဲ့ အဖေက သဘာဝအုပ်စုရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဆိုရင်တော့ မလွတ်တမ်း..။ အဲဒီအခါတိုင်း အဖေ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖော်က ကျမ..။ ကျမက သာဓု… ဆိုတဲ့ သူတို့ အဖေနဲ့ မောင်ဝဏ္ဏ၊ သုမောင်၊ မောင်ရူပ၊ မင်းလူဆိုတဲ့ ညီအကို လေးယောက်စလုံးကို စီးရီးလိုက် ကြိုက်တာ…။ (ဦး)သုမောင်ရေးတဲ့ စာတွေဖတ်ပြီး သူ့မိသားစုဝင်တွေကို အလိုလို ရင်းနှီးနေပြီး ပြောရရင် ခု ဖိုးသောကြာခေတ်ရောက်တော့လည်း ကိုယ့်အမျိုးလိုပဲ စိတ်ထဲ ရင်းနှင်္ီးနေတော့တာ။ တကယ်တော့ ကျမက (ဦး)သုမောင်နဲ့ လူချင်းတခါမျှ မဆုံဖူးခဲ့။ ကျမက ကိုမင်းလူ နဲ့ ကိုဝဏ္ဏ တို့နဲ့သာ ဆုံတတ်တာ။ ဒါပေမဲ့ သုမောင် ကျတော့ အကြင်တို့ လင်မယားကတည်းက .. နှောင်းတမြေ့မြေ့ကတည်းက… အချစ်နဲ့သူ၏ကိုကိုကတည်းက..။ ပြောရရင်.. အချစ် ဆိုတဲ့ လုံးချင်းဝတ္ထုကတည်းကပဲ ဆိုပါတော့။ နောက် ကျမ ကြိုက်တဲ့ ဗမာသံ အမျိုးသား အဆိုတော်တွေထဲ ကိုအံ့ကြီးတို့ စန္တယားလှထွတ်တို့နဲ့အတူ (ဦး)သုမောင်.. ကိုလည်း ကြိုက်လှတာဆိုတော့ …။ ခုချိန်မှာ တော်တော်ပဲ စိတ်ထိခိုက်တာ ခံစားရပါတယ်။
ကျမ နှမျောလိုက်တာ..။ ခေတ်တွေကို တနည်းတဖုံ မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ .. လူတွေကို ရသစာပေနဲ့ စိတ်အမောဖြေပေးနေတဲ့.. အနုပညာနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေ.. ပန်းချီဆရာတွေ.. ဂီတသမားတွေ စောစော ကြွေတဲ့အခါ…… လောကအတွက် သိပ်ကိုနစ်နာတာပဲလို့ ကျမ ခံစားရပါတယ်..။ အဲဒီအခါ ကျမ မျက်ရည် ကျမိပါတယ်..။
“အချစ်..” ကို လွမ်းတယ်..။ “ကိုယ့်အချစ်ဦးခေါင်းမှာ ပန်းလေးတွေ ဝေ” ကို လွမ်းတယ်..။
“လယ်တောကအပြန် ပန်ချင်တယ် ခရေဖူးဆိုလို့..” ကို လွမ်းတယ်..။
“ဒီကမ္ဘာမှာ လူတိုင်း မပြောဖူးတဲ့သူ မရှိပါဘူးကွယ်.. အဲဒါဟာ ချစ်တယ်….” ကို လွမ်းတယ်။
နှောင်းတမြေ့မြေ့ထဲမှာ ကံကြမ္မာကို စိတ်နာနာနဲ့ ခဲလုံးလေးကို ကျုံးကန်လိုက်တဲ့ ရဲဘော်စိုးနိုင်လေးကို လွမ်းတယ်..။
ရှင်နေမင်းသို့ ပေးသောစာကို လွမ်းတယ်..။
သုမောင် ရဲ့ မအေးဘုံကို လွမ်းတယ်..။
သူ့ရဲ့ စာတွေ သီချင်းတွေ.. ရုပ်ရှင်တွေ…။
တကယ့်ကို ခုနစ်စဉ်အလွမ်းလို လွမ်းစရာတွေ များလှပါတယ် ….။
ကျမ နောက်ထပ် အလွမ်းစာတွေ မရေးချင်တော့ကြောင်း ဘယ်သူ့ကို တိုင်တည်ရပါ့…။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပါတီပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မလုက်တော့ဘူးဆိုတော့ စစ်အစိုးရ ရဲ့ ဥပဒေ အရဆိုရင် တရားဝင်နိုင်ငံရေး ပါတီဘဝကနေ တရားမဝင်ပါတီအဖြစ် ရောက်ရပါတော့မယ်။ ခုထိတော့ ရန်ကုန် က အန်အယ်ဒီ ဆိုင်းပုတ်ကို ဇွတ်အတင်း ဖြုတ်ချနေပြီလို့တော့ မကြားရသေး ပါဘူး။ သို့သော် ရေရှည်မှာတော့ အန်အယ်ဒီဟာ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် ရဖို့ ဆိုတာကတော့ မသေချာလှပါဘူး။
ကိုင်း အန်အယ်ဒီဟာ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် မရှိတော့ဘူး ဆိုပါစို့။ တရားဝင်နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံကနေ ပျောက်ကွယ် သွားပြီ ဆိုပါစို့။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒေါ်စုကို မကောင်းပြောခဲ့တဲ့ သူတွေ ဘာဆက်ပြောကြဦးမလဲဆိုတာ နားထောင် ကြည့်ချင်ပါ သေးတယ်။ ဒေါ်စုခေါင်းမာနေလို့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးဟာ နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့သူများ ဘာများဆက်ပြောကြပါဦးမလဲ။ သူတို့ပြောတဲ့ ခေါင်းမာသူရဲ့ ပါတီက တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုရင် အဲသည့်လူများ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ကြဦးမလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းမှု နှေးကွေးတာ ဒေါ်စုကြောင့်ဆိုပြီး အပြစ်ပုံချနေသူများ အခုတော့ ဘယ်သူ့ကို တရားခံရှာကြဦးမလဲ။
လက်လှမ်းမှီသလောက် ကျနော် နာမည်တွေနဲ့ တပ်ပြောပါ့မယ်။ တလောက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရန်ကုန်က ဦးရဲထွန်း။ သူဟာ ဦးသုဝေနဲ့လည်း အလွန်နီးစပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တဦးပါ။ နောက် သည်ဗွိုက်စ်ဝိခ်လီး ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဝေနေဲ့ ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင်တို့နဲ့ သူတိုရဲ့ အီးဂရာ့စ်လို့ခေါ်တဲ့ တတိယလှိုင်း အဖွဲ့၊ ချင်းမိုင် ဘီအမ်အေ ကွန်ဖရင့်ကို လာသွားတဲ့ ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဝင်း၊ ပါမောက္ခ ကျော်ရင်လှိုင် စတဲ့သူများဟာ နိုင်ငံ တကာခရီးစဉ်တွေ၊ ကွန်ဖရင့်တွေ တက်ရောက်နိုင်ခွင့် ရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ထိတွေ့ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိသူတွေ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ သူတို့ယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် အယူအဆတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အခွင့် အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ပိတ်ပင်လို့မရပါဘူး။ ပိတ်ပင်လို့လည်း တရားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ဒေါ်အောင်စုဆန်းစုကြည် အကြားမှာ မတူညီတဲ့ အတွေး အမြင်တွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ မတူတာလည်း ပြဿနာ မဟုတ်ပါဖူး။
ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက် မတူညီတဲ့ အတွေးအမြင် အယူအဆတွေ ရှိနေတာဟာ အပြစ်တင် ရမဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီကို နားလည်သဘောပေါက်သူတိုင်း သိပါတယ်။
သို့သော် အထက်မှာ ကျနော်ဖော်ပြထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက် လာရင် လူချောင်းရိုက်သလို အလုပ်များ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ နှေးနေ တယ်လို့ သူတို့ပြောကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်း နေတယ်လို့ သူတို့တခါမှ ထောက်မပြဘူးပါ။ သူတို့ပြောသလို ဒေါ်စုတဦးတည်း မှာသာ တာဝန်ရှိ တယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တွေက အပြစ်ကင်းစင်သူကြီးတွေလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့အပြောအရ ဆိုရင် အပြစ်ရှိသူက ဒေါ်စုသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ သို့သော် အဲသည့် စကားများကို သူတို့က ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများ ရှေ့မှောက်မှာ ပြောခဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများကိုသာ သူတို့က ရင်ဖွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တချို့ကတော့ သူတို့အပြောကြောင့် ဒေါ်စုကို ခေါင်းမာသူအဖြစ် မြင်ကြပြန် ပါတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့အနေနဲ့ တချို့နိုင်ငံခြားသားတွေဆီက ပြန်ကြားရတာပါ။
ပါမောက္ခ ကျော်ရင်လှိုင်ကတော့ ကျနော့်ကို နှစ်ဦးချင်း မေးခွန်းတခု မေးပါတယ်။ ဒေါ်စုမပါဘဲ စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီပေးရင် ခင်ဗျားတို့ မယူကြတော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အကြောင်းကို ပြောတဲ့နေရာမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ကိုးကွယ်မှု မပါပါဘူး။ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ကျနော့်ကို မေးခွန်းအဲသလို မေးတာကိုက ကျနော်တို့က ဒေါ်စုဘာလုပ်လုပ် မျက်စေ့မှိတ် ထောက်ခံနေတဲ့ သူများဖြစ်လို့ မေးရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပေါက်နေပါတယ်။
စစ်တပ်က ဒေါ်စုမပါရင် တကယ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီ ပေးမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ မထင်ပါဘူး။ သူတို့ ကတော့ ဒေါ်စုမပါတော့ရင် တရန်အေးတယ်လို့တောင် ပြောကြဦးမှာပါ။ ထားပါတော့။ အကယ်၍၊ ကျနော် အကယ်၍လို့ စကားခံထားပါတယ်။ ဒေါ်စုမပါရင် ခေါင်းဆောင်နေရာကနေ နုတ်ထွက်သွားရင် စစ်တပ်က အမှန်ကတယ် ဒီမိုကရေစီပေးမယ် ဆိုပါတော့။ အဲသလိုသာ တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျနော် ပြောရဲပါတယ်။ ဒေါ်စုက ကျမ ကိုငဲ့မနေပါနဲ့ ကျမမပါဘဲ ဒီမိုကရေစီပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ယူလိုက်ပါ။ ကျမ မပါပါဘူးလို့တောင့် သဘောထား ကြီးကြီးနဲ့ ပြောပြီး ခေါင်းဆောင်နေရာက နုတ်ထွက်တောင် ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ အခုလို လူနာမည်တွေနဲ့ တပ်ရေးရတာကတော့ ကျနော်လည်း စိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော် မျိုးဆက်သစ်တွေ ကြားမှာ နောင်အတွက် ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး မဖြစ်ရလေအောင် အခု ကတည်းက ဘွင်းဘွင်းရေးဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ယူဆပြီး ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်လည်း ဒီလိုမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မရေးကြဘူးဆိုရင် နောင်မှာ သည့်ထက်ပိုပြီး ရောင့်တက်လာမှာ စိုးတဲ့ အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ အဝှမ်း ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတောင် ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ သူတို့နောက်လိုက်တွေကို ရှေ့ရှောက် ဘာကိုမှ ထောက်ထားပြီး အားနာစရာ၊ နုတ်ဆိတ်နေစရာ မလိုတော့ ဘူးလို့ ပြောပါရစေ။
နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အဲန်အယ်ဒီပါတီ တရားဝင်မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး ဟာ ဆက်ပြီးနှေးကွေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီတခါတော့ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို တရားခံ ရှာကြဦးမလဲ ဆိုတာ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ သေချာတာကတော့ စစ်တပ်ကြောင့် ဒီမိုကရေစီရေးဟာ နှေးရပါ တယ်လို့တော့ ဒီလူတွေ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၂ ရက် မေလ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်